Christmas collection nke etemeete Chanel 2016
Ebe ọ bụ na October 16, 2015, nchịkọta Christmas nke Chanel 2016 anam-elu n'okpuru aha "Chanel Rouge Noir Holiday Collection 2015-2016" aghọwo nke dị na ụlọ ahịa na Asia na Russia. Ka anyị lebakwuo anya na akwụkwọ ọhụụ ndị a na-enye.
Akụkọ banyere Chanel Makeup Christmas Collection 2015-2016
Nchịkọta a raara nye Christmas na Afọ Ọhụrụ, na-ere n'ahịa ihe dị ka ọnwa abụọ tupu ezumike ahụ. Ha gosipụtara otú stylists n'ụlọ, nke onye na-ewu ewu na-ewu ewu bụ Karl Lagerfeld , na-ahụ, ezigbo nwanyị na oge na-abịa. Ụdị ihe ịchọ mma ndị dị otú a dị mma maka ịmepụta ezumike, n'ihi ya, ọtụtụ n'ime ha na-enye ihe dị mma na njedebe dị mma.
Christmas collection nke etemeete Chanel 2015-2016 afọ a na-raara nye ncheta nke òtù nzuzo ndò nke ntu Polish Rouge Noir, nke na-atụgharị 20 afọ. N'ime afọ iri asatọ na ụma, ụdị ndị ahụ na-agakarị na ikuku na-enweghị ihe e ji echebara echiche, na mgbe ụfọdụ na mbọ na-enweghị ese. N'otu n'ime ihe ngosi ahụ, ndị na-emepụta ihe ahụ kpebiri ichebe mbọ nke ụdị ndị a na-eji mkpịsị aka nke ọgaranya burgundy-brown hue. Ntughari ndi mmadu na "ntughari" a meputara uto nke bọmbụ nke gbawara. Ndị na-eme ihe n'oge ahụ nọ na-achọ ma ghara ịchọta larịị kwesịrị ekwesị n'elu ụlọ. Na iji mezuo ihe a chọrọ, e mepụtara Chanel Rouge Noir nke mbụ n'usoro isiokwu, na ndò mesịrị ghọọ òtù nzuzo ma nweta ọkwa nke kpochapụ. N'ezie, onyinyo nke nwanyị ahụ na-egbu egbu, nwanyị skinle fọrọ nke nta ka ọ ghara ikwe ka ọ ghara iche n'echiche n'enweghị ezigbo mmachi anya na-eji varnish eme ihe na-acha odo odo.
The mejupụtara nke Christmas collection Chanel-2016
Ihe mejupụtara collection nke Christmas na Chanel na 2016 na-agụnye ihe ịchọ mma ịchọ mma, nke na-enye ohere ịmepụta ihe zuru ezu na ihe echebara echiche.
Mepee nchịkọta nke Chanel Les 4 Ombres Signe Particulier - New & Limited Edition. Ọ bụ ihe nkedo anọ nke nchara: beige na satin shine Satin Beige Pink, na-acha odo odo na-acha odo odo, Velvet Purple, agba aja-acha odo odo na-acha ọbara ọbara na Red Saffron Gold. Site n'ụzọ, na-enweghị akwụkwọ gold, ọ bụghị otu Nchịkọta Afọ Ọhụrụ nke afọ ndị na-adịbeghị anya zuru ezu. N'afọ a kwa, a na-etinye ọlaedo ntanye n'ime ndò nke ikpeazụ nke onyinyo, nakwa n'ime pensụ anya anya.
Na mkpokọta, na nchịkọta dị mkpụmkpụ, nkedo abụọ nke pensụl eyeliner: ụdị ọla edo a na-akpọ Chanel Le Crayon Yeux Precision Eye Definer - Nke a na-ejikọtabeghị na obere anụ ahụ, na-ekwughachi agba nke varnish gburugburu ebe a na-ewu ya dum, Chanel Le Crayon Khol Intens Eye Pencil - Limited Edition .
Ọzọkwa, pallet na-agụnye mkpuchi elu. A na-akpọ ha Chanel Joues Contraste Lumiere Highlighting Blush - Akwụsịtụ Nwee ma nwee ndochi peach-beige. Ihe ọzọ, n'ezie, ha mere ha ka ha bụrụ ihe dị elu, ebe ọ bụ na ha na-enwu gbaa ma nye akpụkpọ ahụ ọkụ.
Gụnyere na Christmas collection na ude shades, otu aha na akara varnish - 857 Rouge Noir. Onyunyo a na-akpọ Chanel Illusion D'Ombre Long Wear Lightshadow Eyeshadow.
Nakwa maka nsị nke anya abụọ dị iche iche nke Chanel Le Volume de Chanel Mascara - Nkịtị dị mkpụmkpụ na nwa kpụ ọkụ n'ọnụ kpụ ọkụ n'ọnụ (Nr 90) na ọmarịcha nwa ojii na maroon (Nke 27).
Ihe ọzọ na-esote ọkpụkpụ atọ: abụọ na-egbuke egbuke Chanel Rouge na-egbuke egbuke egbugbere ọnụ na-egbuke egbuke - Nke a na-ejighị ya na pink na-acha odo odo na nwa na-acha uhie uhie na otu ihe mkpịsị mkpụrụ nke Chanel Rouge Allure Velvet Luminous Matte Lip Color - Limited Edition.
Ịnwere ike ịgbakwunye ihe ndozi gị na otu n'ime edemede abụọ nke nnakọta a site n'aka Chanel: Chanel Levres Scintillantes Glossimer-Limited Edition, ma ọ bụ lipstick abụọ ụzọ egbugbere Chanel Rouge Ụdị Igwe Mmiri Na-eme Njikere Abụọ.
Na mezue chanel atọ nke Krismas maka ngwá ọrụ. Otu lacquer Rouge Noir n'okpuru ọnụ ọgụgụ 18, № 757 Rose Fusion na n'elu na sparkles Mbụ Rouge Noir.
Ezigbo jeans - oge mgbụsị akwụkwọ 2016-2017
Uwe Akwa Ugboro 2014
Ejiji ndị inyom na-agbanye ọnụ Jaketị - oyi 2015
Akara nke zebra
Ụdị ejiji - kpochapụwo 2013
Uwe ejiji si chiffon 2013
Uwe a na-adọrọ adọrọ 2016
Igwe eji eme ihe maka anya 2015
Kedu ụdị ntutu isi ugbu a na ejiji 2015?
Scythe na kanekalon - ihe ọhụrụ na-edozi isi na ejiji
Ebube edozi ejiji 2018 - usoro kachasị ọhụrụ, usoro na ụdị akwụkwọ
New collection nke Zara
Ụdị ọgbọ ọgbọ na-enweghị mbara igwe - 6 kachasị mma maka nkasi obi gị
Namibia - yana ịgba ọgwụ mgbochi
Ịgba ndị Ịtali - ụdị
Guacamole ihendori: uzommeputa
Obere obere efere
Enwere m ike ịṅụ mmiri mmiri kwụsịrị?
Ime ọpụpụ nke ụwa - ọ bara uru inwe obi nkoropụ?
Taylor Swift na Carly Closs
Ọnụ ụzọ mpempe akwụkwọ akpaaka
Tommy Hilfiger akpụkpọ ụkwụ
Poteto na chiiz, tinye ya na oven
Ejiji na Basque - ihe ngwọta maka oge nile
Egwuregwu Pịkụl 2016
Ụdị ọkụ na oyi na-acha
Ọrịa nke pancreas - mgbaàmà, ọgwụgwọ
Lily nke ndagwurugwu
Ugbo ala n'ala 2014
Ihe nkedo maka Pizza
Achịkọ nchedo maka rollers
Kedu ka esi gụọ mantras n'ụzọ ziri ezi?